Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Jolay 2019 à 08:37
3 521 octets ajoutés , il y a 3 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Jolay 2019 à 07:40 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Jolay 2019 à 08:37 (hanova) (esory)
Ny Konsily voalohany tao Nikea (na Nisea) dia natao tamin'ny taona 325 ka ny emperora [[Konstantino (emperora)|Konstantino]] no nampiantso azy. Io no konsily voalohany. Izany dia natao mba handraiketana ny maha Andriamanitra an'i Jesosy Kristy ka hanoherana ny fampianaran'i Ariosy ([[Arianisma (teolojia)|arianisma]]) izay noheverina ho [[fampianaran-diso]] tamin'izay. Tapaka fa mitovy fomba (''homoousia'') amin'ny [[Andriamanitra Ray|Ray]] ny [[Andriamanitra Zanaka|Zanaka]] amin'ny maha [[Andriamanitra (tokana)|Andriamanitra]] ny Ray sy ny Zanaka. Navoaka ny [[Fanekem-pinoana nikeana]]. Araka ny lovantsofina dia i Nikolasy avy any Mira (izay fantatra amin'ny hoe Masindahy Nikolà) sy i Spiridona avy any Trimitonta dia nandray anjara betsaka tamin'io konsily io.
Nanamafisana ny zavatra tapaka tao amin'ny Kosilin'i Nikea ny Konsily voalohany tao Konstatinopoly izay nanalavana ny Fanekem-pinoana nikenana ka lasa [[Fanekem-pinoana nikeana|Fanekem-pinoan'i Nikea sy Konstantinopoly]]. Io no konsily faharoa. Ny emperora Teodosio I no mampamory tamin'izany. Tapaka fa Andriamanitra koa ny [[Fanahy Masina]]. Tsy nandray anjara tamin'io ny [[Fiangonana Latina|Fiangonana latina]].
Ny Konsily tao Efeso (na Efesosy na Efezy) dia nanapahana ny maha [[Renin'Andriamanitra]] (gr.: ''Theotokos'') an'i [[Maria (renin'i Jesoa)|Maria]]. Iono konsily fahatelo. Nivoaka noho izany ny Fanekem-pinoan'i Efezy. Tsy eken'ny Protestanta ny fiantsoana an'i Maria ho Renin'Andriamanitra. Nitsipahana ny [[nestorianisma]] koa izany.
Ny Konsily tao Kalkedona no nanambaràna ny fananan'i Jesosy fomba (na natiotra) roa, dia natioran'Andriamanitra sy natioran'olombelona. Io no konsily fahefatra. Izany konsily izany no nanoherana an'i Eotikesy, izay nampianatra fa nifangaro ka tsy azo avahana ao amin'ny natioran'Andriamanitra ny natioran'olombelona ao amin'i Kristy. Heverin'ny tao amin'ny konsily ho fampianaran-diso izany fampianarana izany izay nataony hoe ''[[monofizisma]]''. Ny emperora Teodosio II no nampanao io konsily io. Nivoaka tamin'izany ny [[Fiekem-pinoan'i Kalkedona|Fanekem-pinoanan'i Kalkedona]].
Nanamafisana ny fananan'i Kristy natiora roa ny Konsily faharoa tao Konstantinopoly ka nambara fa sady olona no Andriamanitra i Kristy. Io no konsily fahatelo. Nohelohina ny asa soratra manohana ny [[nestorianisma]]. Ny emperora Jostiniano no nampanao azy ary ny patriarka Eotikiiosy avy any Kostantinopoly no nitarika azy. Ny mba hanamafisan'ny Fiangonana ny fanamelohany ny soratry ny teolojiana telolahy, dia i Teodora avy any Mopsoesto sy i Teodoreto avy any Kira ary i Ibasy avy any Edesa, tamin'ny taona 553. Tsy tratra ny tanjon'ny emperora Jostiniano izay nikendry ny hampîhavana ny Kristiana kalkedoniana sy ny Kristiana monofizita ao amin'ny tapany atsinanan'ny empira.
Nambara tamin'ny Konsily fahatelo tao Konstantinopoly fa manana sitrapo roa i Kristy amin'ny maha olombelona sy Andriamanitra azy, dia sitrapon'olombelona sy sitrapon'Andriamanitra. Io no konsily fahenina. NohelohinaNy nohoemperora izanyKostantino ilayIV ataono hoenampanao io konsily io mba handaminana ny tsy fifanarahan-kevitry ny Fiangonan'i Kostantinopoly sy ny Fiangonan'i Roma nateraky ny atao hoe [[Mônôtelisma|monotelisma]]. Nohelohina noho izany ilay atao hoe monotelisma izay milaza fa i Kristy dia tsy manana afa-tsy hery iray sy sitrapo iray, dia ny sitrapon''Andriaanitra, na dia manana natiora roa aza.
Ny Konsily faharoa tao Nikea dia natao mba hanamelohana ny fanimbana sary masina izay nomena ny anarana hoe ''ikonoklasma''. Io no konsily fahafito. Ny mpomba ny fanimbana ny sary masina dia nilaza fa mifanohitra amin'ny fivavahana kristiana marina ny fampiasana sary hanehoana an'i Kristy sy i [[Maria (renin'i Jesoa)|Maria]] sy ireo olomasina hafa. Nandresy tamin'izany konsily izany ny mpomba ny fampiasana ny sary masina (atao hoe ''ikonodola''). Nekena ny fanajana ny sary masina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/971865"